Markay noloshu ku siinayso boqol sababood inaad jebiso oo ooysid, nolosha u muuji inaad leedahay hal milyan sababa oo aad u qososho oo qososho. Xoog yeelo. - qarsoodi - Quotes Pedia
Markay noloshu ku siinayso boqol sababood inaad jebiso oo ooysid, nolosha u muuji inaad leedahay hal milyan sababa oo aad u qososho oo qososho. Xoog yeelo. - Qarsoodi
Noloshu waligeed ma fiicna. Waxaad lahaan doontaa sababo badan oo aad ku jebiso, aad dareento jahwareer, iyo oohin. Si kastaba ha noqotee, iska hubi inaadan u oggolaan naftaada inaad ku sii jeedo murugada iyo dhibaatooyinka nolosha.
Noloshu waxay ku siin doontaa boqol sababaod oo aad dib ugu noqotid, waxaad dareemeysaa inaad lumisay wax walboo aad waligaa heysay, laakiin hubi inaad sare usii kacday intaas wixii ka dambeeyay!
Waa inaadan fiirin oo keliya fiirsashada nolosha, laakiin waa inaad sidoo kale xoogga saartaa waxyaabaha wanaagsan ee kugu soo dhacayay. Markaad fiiriso, waxaad heli doontaa sababo badan oo aad ku qososho oo aad qososho! Iyaga dooro halkii aad ka walwalin murugada.
Wax yar oo kala duwanaanshaha aragtideena ah ayaa nolosheenna ku samayn kara waxyaabo yaab leh. Muhiim ayey noo tahay inaan xoog yeelano. Noloshu waxay yeelan doontaa kor u kac iyo hoos.
Waxa jiri doona daqiiqado marka aad dareento in gebi ahaanba jabtay, ka dibna waxaa jiri doona xaalado aad dareemi doontid sidii inaad sare u kacayso, oo aad wanaag sameyso, dhoola cadeynayso, oo aad qalbigaaga ku qosoto.
Ku farax inaad diirada saarto dhinacyada wanaagsan, iskuna day inaad naftaada ka soo kabsato cabbirrada xun. Mar alla markii aad taas sameyso, waxaad ogaan doontaa sida in nolosha ay ka sahlaneyd sidii aad waligaa u malaynaysay!
Xoog yeelo, oo sii wad shaqada. Fikirkaaga beddel waxoogaa socodsi, oo waxaad ka heli doontaa waxyaabo fiican oo kugu xeeran.
Noqo Su'aalo Adag
Noqo Muuqaalo adag oo xigasho Muuqaalo
Noqoshada xigashooyin adag
Xigashooyin muhiim ah oo kusaabsan nolosha
Xigashooyin xiiso leh oo ku saabsan nolosha iyo farxad
Erayo dhiirrigelin leh
Xigashooyin dhameystiran oo kusaabsan nolosha
Xigashooyin ku saabsan adkaysi iyo farxad
Joogso Quwadyada Adag
Joog xigashooyin adag oo kusaabsan nolosha
Joogitaanka Quwadyada Adag
Quotes Xoog iyo geesinimo
Xigashooyinka nolosha adag
Xigashooyinka dadka adag
Xigashooyin adag oo kusaabsan nolosha
Xigashooyinka ugu adag
Iskuday inaad Noqoto Quwadyo Adag
Kama hadlayo cidda dhabta ah wajigaaga; Waxay ku saabsan tahay cidda daacad kuu ah gadaashaada. - Qarsoodi
Waxaad ka heli kartaa dad fara badan oo kugu mahadcelin doona oo arrimahaaga wanaagsan kaaga sheekayn doona…
Ilaah waa dhageystaha ugufiican, uma baahnid inaad qaylisid ama cod dheer. Maxaa yeelay, wuxuu maqlaa xitaa salaadda aad u aamusan ee qalbi qumman. - Qarsoodi
Nolosha, mararka qaarkood waxaan dhamaanteen ku soo marnaa waqtiyo adag. Waqtiyadan adag waa farsamo ahaan lama huraan. Waa inaad…
Markii mid albaab kuu xidho, Ilaahay ayaa mid kale kuu furi doona. - Qarsoodi
Markii mid albaab kuu xidho, Ilaahay ayaa mid kale kuu furi doona. - xigashooyinka aan la aqoonsanayn:
Sababta oo ah inaad qaadato waqti ka dheer kuwa kale micnaheedu maahan inaad tahay qof guuldaraystay. Sii wad. - Qarsoodi
Xusuusnow in nolosha, midkeen kastaaba wuxuu helay saacad u gaar ah. Dhab ahaan ma jirto wax micno ah oo ay leedahay…
Haddii aad wali ka sii hadlayso wixii aad shalay sameysay, maanta wax badan maadan qaban. - Qarsoodi
Haddii aad wali ka sii hadlayso wixii aad shalay sameysay, maanta wax badan maadan qaban. - Laxiriirta aan lagaran…